Daawo: 5 arrin oo aan ka baranay dadaalkii DF iyo maxaabiistii ay Ethiopia soo daysay. – Xeernews24
Daawo: 5 arrin oo aan ka baranay dadaalkii DF iyo maxaabiistii ay Ethiopia soo daysay.
23. Juli 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladda Itoobiya ayaa ka dhabeysay balanqaadkii ay usameysay dowladda Soomaaliya oo aheyd iney sii deyneyso maxaabiis boqol ka badan.
114 Maxaabiis ubadan dhalinyaro ayaana xalay kasoo dagtay garoonka diyaaradaha Muqdisho kadib markii laga soo daayay xabsiyadda Itoobiya.
Hadaba, Waxaan halkan idiinku soo gudbineynaa Shan Qodob oo laga bartay Talaabadii ay Itoobiya kusii deysay maxaabiistaas.
1- In Itoobiya ay Dhab ka tahay La Shaqeynta Dowladda Madaxweyne Farmaajo:Dad badan ayaa shaki geliyay in Itoobiya aysan marnaba arki Karin Farmaajo oo madaxweyne ah, laakiin fikirkaas ayaa isbadalay kadib markii soo dhaweyn cajiib ah loogu sameeyay Adis Ababa.
2- Kaalintii Ra’isul Wasaare Kheyre: Inkastoo Madaxweyne Farmaajo uu wax badan fududeeyay, hadana Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa heshiiska maxaabiis lasoo wareegidda saxiixay.
3- Madaxweynaha Soomaali Galbeed oo Shaqo adag qabtay: Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha Ismaamulka Itoobiya Cabdi Maxamuud uu kaalin weyn ku lahaa in dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay heshiisyaan.
4- Itoobiya Waxey sii deysay Maxaabiistii dambiyada yar loo haystay: Wali xabsiyadda Itoobiya waxaa ka buuxa maxaabiis Soomaali ah oo danbi Shabaabnimo ubadan ku eedeysan, taas ayaana muujineysa in maxaabiista lasii daayay ay yihiin kuwa dembiyo yar yar loo heystay.
5- Maxaa la gudboon Dowladda Soomaaliya: Maxaabiis badan oo Soomaali ah ayaa ku xiran xabsiyadda caalamka gaar ahaan kuwa Afrika, qaarkood waxaa loo haystaa dambiyo aysan gelin, dowladda ayaana looga fadhiyaa iney qaado talaabo kale si dadkaas loo soo bad baadiyo.
HOOS KA DAAWO DAREENKA DADKII ITOOBIYA LAGA SOO DAAYAY
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/07/Maxaabiis.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-07-23 10:00:192017-07-23 10:02:14Daawo: 5 arrin oo aan ka baranay dadaalkii DF iyo maxaabiistii ay Ethiopia soo daysay.
Goobihii iyo Dadkii Hargeysa Daldashay oo Go,aan kama dambays ah soo Diray Ciidamo soomali ah oo wata tuutaa imaaraadka carabta oo lagu arkay gobolka marib...